रियलको दसौं जित, बार्सिलोना ओसासुनासँग बराबरीमा रोकियो- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
रियलको दसौं जित, बार्सिलोना ओसासुनासँग बराबरीमा रोकियो
काठमाडौँ — रियल म्याड्रिडले स्पेनी ला लिगामा आइतबार राति लगातार दसौं जित निकालेको छ । यसका लागि छिमेकी एटलेटिको म्याड्रिडलाई सजिलै २–० ले हरायो । बार्सिलोना भने अर्को खेलमा ओसासुनासँग २–२ को बराबरीमा रोकियो ।
रियलको जितमा करिम बेन्जेमा र मार्को एसेन्सोले एक-एक गोल गरे । डिफेन्डिङ च्याम्पियन एटलेटिकोमाथि प्राप्त यो जितपछि रियलले लिग तालिकाको शीर्ष स्थानमा आठ अंकको स्पष्ट अग्रता खोलेको छ । उसको १७ खेलबाट ४२ अंक छ भने एक खेल कम खेलेको सेभिया ३४ अंकमा छ ।
बार्सिलोना भने १६ खेलबाट २४ अंकमा आठौं स्थानमा रहेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २७, २०७८ ०७:२१
‘लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व आउँछ’– निधि
काठमाडौँ — कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशमा नेतृत्व चयनका लागि सोमबार बिहान मतदान हुँदैछ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिका विभिन्न पदमा सयौं आकांक्षीहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले प्यानलै बनाएर नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् ।सभापतिमा युवा नेता कल्याण गुरुङले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
महाधिवेशनमा उम्मेदवारका समीकरण, नेतृत्व र एजेन्डाबारे सभापतिका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधिसँग कलेन्द्र सेजुवालले गरेको कुराकानी :
सभापतिमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?
मैले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो– हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणाली र नयाँ संविधान ल्याएका छौं । यसको सफल कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । यो कांग्रेस पार्टी मात्र नभई पूरै देश र सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा हो । यसका लागि कांग्रेसले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुपर्छ । कांग्रेसको सभापतिका हैसियतले त्यसलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनेछु । दोस्रो– एक वर्षभित्रै तीन तहका निर्वाचन हुँदै छन् । तीनवटै निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउनुपर्नेछ । कांग्रेसले नजित्दा संघीय प्रणाली, संविधान र राज्यका अंगहरू क्षत–विक्षत भएको हामीले देखिसकेका छौं । त्यसको सुधारका लागि र बिग्रेको कुरालाई लिकमा ल्याउन कांग्रेसले मात्र सक्छ ।
म सभापतिको हैसियतले यो भूमिकामा आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु । र, तेस्रो– युवा पुस्ताको नेतृत्व दाबी अग्रताबिना राजनीतिक स्थिरता, विकास, आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । युवाको प्रभावकारी भूमिकाबिना देशको राजनीति गतिशील हुन सक्दैन । म सभापतिको हैसियतले युवा वर्गलाई अभियानको सहजकर्ता बन्न चाहन्छु ।
लामो समय शेरबहादुर देउवासँग रहनुभयो, अहिले उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दा कस्तो अनुभव भएको छ ?
कुनै पनि चुनाव सहज हुँदैन । हिजोको सम्बन्ध जेजस्तो भए पनि अहिले पार्टीको निर्वाचनमा सहभागी भएर देश, पार्टी र लोकतन्त्रप्रति सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको अनुभूति गरिरहेको छु । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मतदाताको मन जित्नु हो । य यही कुरामा एकाग्र छु ।
यो महाधिवेशनबाट तपाईंको छुट्टै विचार समूह निर्माण हुन्छ ?
पूरै कांग्रेस एउटा विचार समूह हो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, अहिंसा, शान्तिजस्ता सिद्धान्त कांग्रेसका विचार हुन् । कांग्रेस विचारमा प्रतिबद्ध पार्टी हो । म गुटभन्दा माथि उठेर विचारको प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छु । विचारका आधारमा राजनीतिक शासन प्रणाली बलियो बनाउने हो, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ ।
तपाईंको उम्मेदवारीमा पारिवारिक विरासतले कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
मेरो पिताजी (महेन्द्रनारायण निधि) कांग्रेसको संस्थापकमध्ये एक महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्थ्यो । निधिको छोरो भएकाले मलाई सहज हुने भइहाल्यो । तर म आफैं पनि बच्चैदेखि जेलनेल भोगेको व्यक्ति हुँ । टीका लगाएर नेता भएको होइन ।
महाधिवेशनमा मधेस (प्रदेश २) को मत निर्णायक हुने अवस्था कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
मेरो सन्दर्भमा मैले मधेसमात्र होइन, पूरै देशभरिको मत पाउँछु । हिमाल, पहाड, तराई, सातै प्रदेशका साथीको सद्भाव मैले पाएको छु । मैले नेविसंघको अध्यक्ष र पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा काम गरेको हुनाले देशभरिका साथीसँग राम्रो सम्बन्ध छ । मलाई बीपी कोइरालाले कलिलैमा नेविसंघ अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।
तर तपाईंले महाधिवेशनमा प्यानल बनाउन सक्नुभएन नि ?
अलिकति समय पनि नमिलेको हो तर महत्त्वपूर्ण कुरा म गुटभन्दा माथि उठ्न खोजेको हुँ । मेरो टिममा धेरै साथी हुनुहुन्छ ।
कस्तो नतिजाको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनबाट उत्साह, एकता र रूपान्तरणको मूल नारा तय गरेको छ । रूपान्तरण भनेको परिवर्तन हो । संगठनको स्वरूप, विचार र नेतृत्वमा परिवर्तन हुनु हो । त्यसैले यस महाधिवेशनले मूलभूत रूपमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु । तर सभापति (शेरबहादुर) जीले सत्ता र पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा लिन प्रयत्न गरिरहनुभएको छ । रामचन्द्रजी जस्तो नेताले महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग हुने काम गर्नुभयो, यसमा सभापतिजीले विशेष भूमिका लिनुपर्थ्यो । त्यतातिर ध्यान जान सकेन । त्यसैले अबको महाधिवेशनले पार्टीप्रति जिम्मेवार, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व ल्याउँछ ।
ग्रिष्मा टिम फुटसल विजेता
ट्राइ–एड्भेन्चरमा आर्मीको क्लिन स्विप
आईपीएल : मुम्बईले दिल्लीलाई हराएपछि बेंगलोर प्ले अफमा